Emmerson Dambudzo Mnangagwa (wuxuu dhashay 15 Sebtember 1942) waa kacaanyahan reer Zimbabwe ah ahna siyaasi soo qabtay xilka Madaxweynaha Zimbabwe tan iyo 24 Nofeembar 2017. Xubin ka tirsan xisbiga ZANU – PF oo ay muddo dheer xulufo ahaayeen madaxweynihii hore Robert Mugabe, wuxuu qabtay xilal wasiiro oo dhowr ah wuxuuna ahaa Mugabe. Madaxweyne ku xigeenka ilaa Nofeembar 2017, markii xilka laga qaaday ka hor inta uusan xukunka ku qabsan inqilaab. Wuxuu xaqiijiyey muddadiisii ​​ugu horreysay ee buuxda ee madaxweyne doorashadii guud ee 2018.
Mnangagwa wuxuu ku dhashay sanadkii 1942 magaalada Shabani, Koonfurta Rhodesia, wuxuuna ka dhashay qoys weyn oo reer Shona ah. Waalidiintiis waxay ahaayeen beeraley, kontomeeyadii isaga iyo qoyskiisana waxaa lagu qasbay inay u guuraan Waqooyiga Rhodesia sababtoo ah dhaqdhaqaaqiisa siyaasadeed ee aabihiis. Halkaas ayuu uga firfircoonaaday siyaasad gumeysi-diidka ah, 1963-dii ayuu ku biiray Jabhaddii Xoreynta Qaranka Afrika ee dhawaan la sameeyay ee Zimbabwe, garabka xagjirka ah ee Zimbabwe African National Union (ZANU). Wuxuu ku noqday Rhodesia 1964 isagoo ah hogaamiyaha "Gangasta Yaxaaska", koox weerartay beero ay leeyihiin dad cadaan ah oo kuyaala Bariga Highlands. Sannadkii 1965, wuxuu duqeeyey tareen u dhowaa Fort Victoria (oo hadda loo yaqaan Masvingo) oo wuxuu xidhnaa toban sano, intaas ka dib waa la sii daayey oo waxaa loo masaafuriyey Zambia oo dhowaan madax-bannaaneyd. Wuxuu bartay sharciga jaamacada Zambia, wuxuuna soo qabtay qareennimo mudo labo sano ah kahor inta uusan aadin Mozambique si uu dib ugu biiro ZANU. Halkaas waxaa loo qoondeeyey inuu noqdo kaaliyaha iyo ilaaliyaha Robert Mugabe, oo uu u raacay heshiiskii guriga ee Lancaster, kaas oo keenay in Zimbabwe la aqoonsado madax-bannaanida 1980-kii.
Xorriyadda ka dib, Mnangagwa wuxuu qabtay jagooyin sare oo xilal sare oo wasiirnimo ah xilligii Mugabe. Sanadihii 1980 ilaa 1988, wuxuu ahaa wasiiru dowlihii ugu horeeyey ee Amniga Qaranka, wuxuuna kormeeray Ururka Sirdoonka Dhexe. Doorkiisa xasuuqii Gukurahundi, kaas oo lagu laayay kumanaan qof oo reer Ndebele ah intii uu xilka hayay, waa mid muran badan dhaliyay. Mnangagwa wuxuu ahaa Wasiirka Cadaalada, Sharciga iyo Arimaha Barlamaanka intii u dhaxeysay 1989 ilaa 2000 ka dibna wuxuu noqday Gudoomiyaha Baarlamaanka intii u dhaxeysay 2000 ilaa 2005, markii loo dallacsiiyay Wasiirka Guriyeynta Reer Miyiga isagoo si bareer ah ula kaftamay inuu xilka kala wareego Mugabe oo gaboobay. Waxa uu ku soo noqday xisbigiisa intii lagu jiray doorashadii guud ee 2008, taas oo uu ka waday ololihii Mugabe, abaabulka rabshadaha siyaasadeed ee ka dhanka ah mucaaradka dhaqdhaqaaqa dhaqdhaqaaqa isbeddelka dimuqraadiga - Tsvangirai. Mnangagwa wuxuu soo qabtay Wasiirka Difaaca intii u dhaxeysay 2009 ilaa 2013, markii uu markale noqday wasiirka cadaalada. Waxaa sidoo kale loo magacaabay Madaxweyne-ku-Xigeenka Koowaad ee 2014 waxaana si weyn loogu tixgeliyey inuu yahay musharrax hoggaamineysa oo beddelaya Mugabe.
Jagada Mnangagwa waxaa ka horyimid xaaska Mugabe, Grace Mugabe, iyo jabhaddeeda siyaasadeed ee Generation 40. Mugabe wuxuu shaqada ka ceyriyay Mnangagwa xilalkii uu hayay bishii Nofeembar 2017, wuxuuna u cararay Koonfur Afrika. Wax yar ka dib, General Constantino Chiwenga, oo ay taageerayaan xubno ka tirsan Ciidamada Difaaca Zimbabwe iyo xubno ka tirsan kooxda siyaasadeed ee Mnangagwa ee Lacoste, ayaa bilaabay afgambi. Markii uu lumiyay taageeradii xisbiga ZANU – PF, Mugabe wuu is casilay, Mnangagwa wuxuu ku noqday Zimbabwe si uu u qabto xilka madaxtinimada.
Mnangagwa waxaa lagu naanaysaa "Garwe" ama "Ngwena", oo macnaheedu yahay "Yaxaas" luqadda Shona, markii hore maxaa yeelay taasi waxay ahayd magaca kooxdii dhuumaalaysiga ahayd ee uu isagu aasaasay, laakiin markii dambe siyaasaddiisa awgeed. Qeybta ka tirsan xisbiga ZANU – PF ee isaga taageerta waxaa lagu magacaabaa Lacoste oo loogu magac daray shirkada dharka ee Faransiiska oo astaanteedu tahay yaxaas. Waxaa looga yaqaan gobolka uu ka soo jeedo ee Midlands inuu yahay "Aabbaha Ilaah."
Mnangagwa waxaa lagu soo daray 100 qof ee ugu saameynta badan 2018 majaladda Time.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Emmerson_Mnangagwa&oldid=205996"
Last edited on 30 Sebteembar 2020, at 12:09
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 30 Sebteembar 2020, marka ee eheed 12:09.